I-Hawaii COVID ngaphandle koLawulo kunye neMet ngeRekhodi yoKhenketho kunye nokuThula
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » I-Hawaii COVID ngaphandle koLawulo kunye neMet ngeRekhodi yoKhenketho kunye nokuThula
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Misa iinqwelomoya ukuze uqalise iindiza ezintsha eziya eHawaii
Ezokhenketho eHawaii zinengxaki yezempilo akukho mntu ufuna ukuxoxa. Iindwendwe eziza ngamanani eerekhodi zizisa ingeniso efuneka kakhulu kurhulumente, ke kuyabonakala ukuba le ngxaki yezempilo ayizukutshintsha izinto. Wamkelekile kumntu ogula kakhulu Aloha Urhulumente. Masithembe ukuba zonke iindwendwe ziyagonywa. Abahambi baya eHawaii, bambelela kwaye ulungele uhambo lwe-adventure yobomi.
IRhuluneli yaseHawaii uIge uyala ukuphendula eTurboNewkunye Iindaba zaseHawaii ezikwi-Intanethi.
USodolophu wase-Honolulu uRick Blangiardi uthule, uzihlukanisa nemibuzo engathandekiyo eTurboNews.
Umphathi weGosa lezoKhenketho eHawaii uJohn De Fries kunye neHawaii Lodging kunye ne-CEO yoMbutho wezoKhenketho uMufi Hannemann bebethintela imibuzo ukusukela oko i-COVID-19 yaba ngumcimbi kwishishini labatyeleli laseHawaii.
I-COVID-19 ayikho kulawulo eHawaii, kodwa ukhenketho luhamba nokuhamba. Iinkokeli zezokhenketho azinanto zingayithetha kubakhenkethi. Iindwendwe ezinjalo kufuneka zibe zixhalabile ngemini. Elixhala lihlangatyezwa cwaka ngabo babenyulwe ukuba bakhokele.
Ukuthula yimpendulo egcina ubuso eyaziwa kwiinkcubeko zaseAsia, oko kuthetha ukuba ishishini le-PR liqhelekile eHawaii.
Kwiintsuku ezintandathu ezidlulileyo, olu papasho uxele inombolo erekhodiweyo erekhodwe ngamatyala e-COVID-19 eHawaii. Eli nani ngoku likonyuko lwesibini oluphezulu, kwaye irekhodi elitsha namhlanje lithetha olunye uloyiso lwentsholongwane.
Ukujonga i-53.7% yabemi baseHawaii ngoku bagonywe ngokupheleleyo, kwaye i-71.7% ifumene ubuncinci ifoto enye yePfizer okanye iModerna, usulelo olutsha luyothusa nangakumbi kuba phantse bonke baphakathi kwe-46.3% engekogonywa ngokupheleleyo. Nokuba lelona xesha libi lobhubhane, amanani anjalo awazange abonwe kurhulumente.
Kwanaxa ukhenketho noqoqosho lwaye lwema ngaphambi kwe-15 ka-Okthobha kunyaka ophelileyo, amanani osulelo anjalo ayengasondeli nakoko kuviwa yiHawaii ngoku.
Umntu unokuphikisana kuphela namatyala asi-8 anokuhambelana nokuhamba izolo, kodwa okungachazwanga kukuba ngamatyala angama-61 kuphela anokudityaniswa nokuqhambuka koluntu, kodwa amakhulu amatyala ongezelelweyo, enza ukuba uninzi lwazo zonke iimeko zingaziwa.
Njengokuba bekunjalo kuyo yonke le ngxaki, i Igunya lezokhenketho laseHawaii kuthe cwaka, kwaye ngoku oku kuthi cwaka kungqinwa yiRhuluneli u-Ige, ooSodolophu, nabo bonke abanye abantu abaphetheyo.
Phantse kuma-30,000 abatyeleli abafika eHawaii yonke imihla, iivenkile zokutyela zivulekile, iimaski kunye nokuhamba kwezentlalo kubonakala kungabalulekanga.
Ngelishwa, umntu unokuthi uqoqosho lukhokele kwezempilo, kodwa iGunya lezoKhenketho eHawaii lixakekile lifumana iindlela zokudimaza ukhenketho oluninzi.
Isizathu soko ayisiyi-COVID-19 kodwa kukukhuselwa kwemicimbi yenkcubeko kunye notshintsho lwemozulu.
Kwiingxelo ze-COVID-19 zamva nje ezivela kuRhulumente we Aloha State, 655 amatyala amatsha e-Hawaii COVID-19 azisa itotali kwi-44,617 (inyuke nge-1.4% kusuku olungaphambili). Eli lelona nani liphezulu lamatyala abhalwe ngosuku olunye.
Ngokuka Lt. Gov. Josh Green, oku kuqubuka kungenxa ye Delta Variant. Njengomphumo othe ngqo, izibhedlele ziyakhula kwaye namhlanje zifumana i-166 inyangwa esibhedlele, inqanaba lokufumana amandla li-6.89%.
Ukuza kuthi ga ngoku, iimvavanyo ezili-1,883,809 ze-COVID-19 sele zenziwe nge-42,439 zikhokelela kufundo olululo kunye nokumakisha inqanaba lokufumana okuhle kwi-6.9%.
Okwangoku, umndilili wecala lemihla ngemihla ngama-437.6. Ewonke angama-4,391, 14 amatyala axelwe kwiintsuku ezili-538 ezidlulileyo. Inani labaswelekileyo ukuza kuthi ga ngoku ngama-1.2 (XNUMX%).
Ukonakala kwamatyala anamhlanje zezi:
Isithili saseHawaii: 131
Isithili seMaui: 69
Isithili seKauai: 7
Ukuza kuthi ga ngoku umhlaba wonke ucwangcisiwe. Iilwandle, iihotele, kunye neenqwelomoya zigcwele. Iindwendwe azisoloko zibonwa zinxibe iimaski kwaye ziba nexesha elimnandi elunxwemeni, kwiivenkile zokutyela, echibini, kwiiklabhu zasebusuku nakwindawo ezinomtsalane.
Nabani na ohlala kwingingqi yeWaikiki uva iialarms ngoku ngoku rhoqo nge-24/7, iibhedi zesibhedlele ziyagcwaliswa, kodwa ngenxa yenani elikhulu labantu abagonyiweyo, inqanaba lokufa, ngethamsanqa, lihlala liphantsi ngokufanelekileyo.
Ngaba kuya kubakho naziphi na izithintelo kumbhobho? Akunakulindeleka, ngokwezibonakaliso zeRhuluneli Ige.
Agasti 11, 2021 kwi-09: 30
Abantu abali-131 kwiSiqithi Esikhulu banomkhuhlane… ayivakali njengengxamisekileyo kum. Uninzi luya kuphila lodwa kwaye emva koko luya kuqhubeka nobomi babo njengoko kufanelekile kuthi sonke. Akusekho kuvalwa, imaski okanye ukudeda ekuhlaleni okufunekayo- sikwezo zingaphezulu konyaka kwaye azisebenzi.
Agasti 6, 2021 kwi-17: 44
UMaybi ugcwele inkunkuma usasaza ulwazi olungeyonyani ndihlala kwi-Big Island kwaye ndalahlekelwa ngabantu abayi-4 ukuya kwi-covid undixelele ukuba kuxoka njani xa abantu bechaphazeleka yonke imihla ngamazinga aphezulu isidenge esinganxibanga iimaski zazo isidenge asikhethi ukugonywa ngeli nqanaba siza kuphinda sivale kwakhona ngenxa yezidenge ezinje ngokusasaza ulwazi olungelulo
Agasti 6, 2021 kwi-01: 04
Isiqithi esikhulu sinokonyuka kwesibini ngobukhulu namhlanje, kodwa ndiyavuma ukuba ziindawo ezivulekileyo- hayi njengeWaikiki okanye iOahu ngokubanzi.